ဘဲလ်စက်ဘီး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ ဘဲလ်စက်ဘီး အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့၏ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်း၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများ, ပစ္စည်းရောင်းသူနှင့်တင်ပို့သောတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ ဘဲလ်စက်ဘီး။ ငါတို့သည်လည်းကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်အားဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်မှထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့နေကြပါတယ် Taiwan။ ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ပိုင့်အဘယ်အရာကို, ငါတို့သည်လည်း client များလိုအပ်ချက်များအတိုင်းဖန်ဆင်းတော်သောဒီဇိုင်းများများအတွက်စီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်။
ပုံစံ - JH-650A1/JH-650A2/JH-650A3/JH-650A4/JH-650AL-B
ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10pc/box 200pc/ctn.,2.၂ ပေ.
ဆး.ဒဗလျူ.:၁၁ ကီလို G.ဒဗလျူ.:၁၃ ကီလိုဂရမ်
အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့.
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/bell-bicycle.html
အကောင်းဆုံး ဘဲလ်စက်ဘီး ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ဘဲလ်စက်ဘီး ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ဘဲလ်စက်ဘီး ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan